के छ पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रमा भिन्नता ? - Everest Dainik - News from Nepal
के छ पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रमा भिन्नता ?
पूँजीवाद मानिसको लोभमा आधारित हुन्छ भने समाजवाद मानिसको आवश्यकतामा । होइन त ? कदापि होइन । बरू यसको ठिको विपरित पो सत्य हो । पहिलोमा स्वतन्त्रतासाथ विकासको सम्भावना अत्याधिक रहन्छ भने पछल्लोमा स्वतन्त्रता साथै विकासको पनि अक्सर निकास भएको पाइन्छ
आजको कुनै पनि ठूलो बजार, जस्तै कि अमेजनकै कुरा गर्नुहोस् त । त्यसमा उपलब्ध सबै सेवा तथा वस्तुहरू त्यस्ता मानिसहरूको काम परिश्रमका उत्पादन हुन् जसले आफूलाइ कुनै कुरा खाँचो परेको अनुभव गरे, त्यो खाँचो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोचे, अनि त्यसमा लागि परे । उनीहरू सही छन् भने, सफल बन्छन्, गलत छन् भने असफल, त्यस व्यवसाय त्यस समयको लागि असफल बन्छन् ।
समाजवादी अर्थप्रणालीमा सरकार वा राज्यसँग अन्तिम अधिकार रहन्छ । यसमा सरकारले नै निर्धारण गरेका सीमित उत्पादक र आपूर्तिबाट सीमित मात्रामा मात्रै जनताले प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो निम्ति आफै निर्णय गरी छनोट गर्ने अवस्था विपरित केही मुठ्ठीभर सरकारी उच्चपदस्थहरूले जनताले कति वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नसक्छन् र कति मूल्यमा त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तोक्दछन् । अनि यस्तो व्यवस्थामा केही समयका लागि कर बल जोड दबाबवले अर्थव्यवस्था द्रूत गतिमा विकास गरेझैँ देखिए तापनि, छिट्टै त्यो तासको महलझैँ गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्न पुग्छ ।
अनाैठो मान्नु पर्दैन कि कथित समाजावदाी साम्यवादी राष्ट्रहरूमा सरकारी सञ्चारमाध्यम देखाउने बाहेकका पसल वा बजार वा स्टोरहरूमा अत्यावश्यक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति देख्न कठिन हुन्छ, जस्तै कि ट्वाइलेट पेपरसमेत पाउन कठिन हुन्छ भने पाउरोटीका टुक्राटाक्री खरिद गर्न हजाराैँ, लाखाैँ स्थानीय मुद्राको खाँचो पर्छ । पछिल्लो उदाहरण भेनेजुएला हो, जो दुई दशक अगिसम्म दक्षिण अमेरिकाको एक बलियो आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको थियो ।
पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरू पनि त कमोवेस समाजवादी अर्थप्रणालीमा चल्छन्, होइन र ? नेपालमा साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रको दाबी पनि त्यही छः नर्डिक मुलुकहरूको जस्तै वेल्फेयर स्टेटको परिकल्पना । अँ, तर सत्यता अलि भिन्न छ । पश्चिम युरोपमा कुनै पनि समाजवादी राष्ट्र छैन । सबै पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा छन् । अमेरिकासँग उनीहरूको भिन्नता भनेको सरकारी स्तरमा उपलब्ध कल्याणकारी सहायता रकमको मात्रा मात्रै अलि बढी हो ।
पूँजीवादविना, हुँदाखाँदाको अवस्थामा रहेको कुनै पनि देश अर्को भेनेजुएला बन्छ ।
हार्भार्डमा सन् २०१५ मा दिएको एउटा भाषणमा डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले यो कुरा स्पष्ट पार्न निकै परिश्रम गरेका थिएः “मलाई थाहा छ कि अमेरिकामा कतिपय मानिसहरूले नर्डिक मोडललाई …. समाजवादसँग जोडेर हेर्छन्, त्यसकारण म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । डेनमार्क समाजवादी शैलीको अर्थव्यवस्था होइन । डेनमार्क त खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आधारित अर्थव्यवस्था हो ।”
जति बढी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था सफल बन्छ, समाजवाद वा साम्यवादको चाहना वा खाँचो उति नै बढी कम हुँदैजान्छ । पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाले उदार प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्दतिलाइ बलियो बनाउँछ भने समाजवादले उच्च शासक वर्गको तानाशाही जन्माउँछ । सधैँ यस्तै हुँदै आएको छ, सबैतिर, अपवादविना ।
प्रेगरयुका लागि एण्डी पुज्डर, हार्दी एण्ड कार्लस् जुनिएर रेस्टुराँका पूर्व सिइओको प्रस्तुतिमा आधारित ।
ट्याग्स: पूँजीवादी अर्थतन्त्र, बिदुर अधिकारी, समाजवादी अर्थतन्त्र